Paarlaamaan Kaataalaan Ispeenirraa walaboomuu labsuus kan Ispeen immoo of-jalatti isaan bulchuuf murteesse - BBC News Afaan Oromoo
Paarlaamaan Kaataalaan Ispeenirraa walaboomuu labsuus kan Ispeen immoo of-jalatti isaan bulchuuf murteesse
Goodayyaa suuraa Yeroo sagaleen kennamaa turetti deeggartoonni fuuldura paarlaamaa Kaataalaanitti walitti qabamani turan
Paarlaamaan bulchiinsa naannoo Kaataalaan walabummaa labsuus paarlaamaan Ispeenis kallattiin Kaataalaan bulchuuf murtee dabarseera.
Murteen paarlaamaa Kaataalaan sagalee 70'n kan darbe yoo ta'u 10 mormaniiru, lama immoo sagalee hin kennine.
Miseensonni mana maree dhaaba mormituu bakka bu'an sagalee osoo hin kenniin hafaniiru.
Gama kaaniin, filannoo paarlaamaa Kaataalaan booda seeneetin (manni maree olaanaa) Ispeen mootummaan Ispeen bulchiinsa Kaataalaan kallattiin akka bulchu murtesseera.
Deeggarsa sagalee 214'n kan murtaa'e yoo ta'u 47 mormaniiru.
Mummeen ministiraa Ispeen Maariyaanoo Raahoy duratti senaatarootatti akka dubbatanitti bulchiinsa mootummaa gidduugaleessaa jala galchuun Kaataalaan keessa, ''seerri, dimookiraasii fi nageenyi '' akka jiraatu taasisa jedhani turan.
Wladhabdeen kuni ji'a dura yeroo Kaataalaan filannoo waldhabsiisaa taasifameen bilisummaa filachuu isaanii hordofee kan eegale dha.
Mootummaan Kaataalaan akka jedhetti lammiilee rifarandamii irratti sagalee kennan dhibbantaa 43 yeroo ta'an, isaan keessaa dhibbantaan 90 bilisoomuu filataniiru. Manni murtii heeraa Ispeen garuu filannoon suni seeraan ala jedhee ture.
Seeneetiin Ispeen keeyyata 155 heera Ispeen keessa jiru yeroo duraaf hojiirra oolchuuf murtesseera. Murteen kun mootummaan giddugaleessaa bulchiinsa Kaataalaan dirqisisuuf humna dabalataa isa gonfachiisa.
Mootummaan Maadriid jiru keeyyata kanaan fayyadamuun hoggantoota Kaataalaan aangoo irraa kaasuu, faayinaansii, poolisii fi miidiyaa naannichaa to'achuu danda'a.
Isa hogganaan Kaataalaan bilisummaa labsan Maadriid harkatti tuffatte
Kaataalooniyaan 'Ispeeniin gargar bahuuf mirga gonfatte'